Kungekudala i-youtube izaguqulela izihloko zevidiyo kulwimi lwakho lwasekhaya
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-YouTube kungekudala izakutolika izihloko zevidiyo kulwimi lwakho lwasekhaya
I-YouTube kungekudala izakutolika izihloko zevidiyo kulwimi lwakho lwasekhaya
I-YouTube kuthiwa isebenza kwinto entle epholileyo enokuthi iqhubeke nendlela yayo kwi-YouTube kunye nakwiwebhusayithi kungekudala.
Ngoku ka Amapolisa e-Android ,iqonga belivavanya uvavanyo lwendalo lwasekhaya olungazukubonisa kuphela izihloko zevidiyo kulwimi olukhethileyo, kodwa kunye neenkcazo, iintloko, kunye nokunye.
Phantse ngalo lonke ixesha iYouTube inezinto ezithile ezitsha eziya phezulu emkhonweni, ihlala ivavanywa kwiibhetshi ezincinci zabasebenzisi kwiinyanga ezimbalwa, ukufumana ingxelo kunye nokuyipolisha ngaphambi kokuba ikhutshelwe uluntu.
Sikubonile oku ngaphambili kunye nokukhululwa kwe- Iifutshane ze-YouTube , kwaye siyayibona ngoku ngenani elithile labasebenzisi ababona ngequbuliso iividiyo kunye nolwakhiwo lwabo lonke oluguqulelwe phakathi kwesiPhuthukezi nesiNgesi.
Ukuba le nto iyenzeka kuwe kwaye ufuna ukuyicima, wena & apos sikwithamsanqa elinzima. Olu tshintsho luza kumncedisi kunokuba luhlaziye usetyenziso, kwaye akukho nto unokuyenza malunga nabo ukuba kunokwenzeka ukuba ubengomnye wabo uphando & iiapos Guinea iihagu ngeli xesha. Amapolisa e-Android ayibonile le nto isenzeka ngesiPhuthukezi nangesiNgesi ukuza kuthi ga ngoku.
Ndiye ndaliqaphela itayitile elinamaxesha lisuka kwi-YouTuber flip eyaziwayo yesiSpanish eya eSpanish (ulwimi olusetelwe kwifowuni yam) kulondli lwam lobuqu kwi-YouTube app. (Ayina-apos; ayingqinelani, apha naphaya!)
Kukho abantu abaye baxela into enjalo kwi Iforum yoNcedo kuYouTube Ukuya emva nje ngo-2019, kunye nezihloko zevidiyo zentsholongwane ezitshintsha ulwimi ngokungathandabuzekiyo kunye nokuhlaba intsingiselo yazo yoqobo-kodwa akukho mntu waziyo ukuba kutheni.
Ngoku ukuba abasebenzisi abambalwa bebesibona umxholo wokuguqula isihloko kwi-YouTube feed, nokuba bayayifuna, ayinguye wonke umntu obonakala onwabile ngayo-ngakumbi kuba akukho & apos akukho ndlela yokuyicima ngalo mzuzu.
Ngelixa ukubanakho ukuguqula into eguqulweyo ngokuzenzekelayo kwizihloko zevidiyo kunokuba luncedo kakhulu kwiintlobo ezininzi zomxholo wemfundo, ngokwendalo, ixabiso lamahlaya okanye iipuniki ezithile zolwimi ezinokulahleka kuguqulo.
Eyona misebenzi ilungileyo ye-S Pen ye-Galaxy Note 9 kunye ne-Galaxy Tab S4
Iifoto zikaGoogle 'Umgangatho ophezulu' vs 'Original': Yeyiphi i-Apos umahluko kwaye kufuneka ukhathalele
I-Apple iPhone 12 Pro Ubomi bebhetri: konke kulungile ngaphandle kwale nto inye
Ngaba ubusazi: ungasika i-microSIM kwi-nanoSIM ngokwakho
Guqula i-Android yakho ibe yi-iPhone X ngezi ziqalisi, ii icon, kunye neeapps
Thenga iApple iPhone 5c kwiWalmart nge- $ 45 kwisivumelwano; Umthengisi uthoba ukutya kweyona nto ithengiweyo
Uyiguqula njani i-Galaxy Qaphela 10 kwitafile yokuzoba